Ku saabsan doorashada kaniisadda - Kyrkovalet
Ku saabsan doorashada kaniisadda (somaliska)
Ku saabsan doorashada kaniisadda
Information om kyrkovalet på somaliska
Waad codeyn kartaa laga bilaabo Sebtember 6 ilaa maalinta doorashada ee Sebtember 19. Adoo codeynaya, waxaad saameyn kuleedahay waxa ay tahay inay kaniisadu kaqabato deegaanka, gobolka iyo wadankaba. Maxaad u maleyneysaa inay kaniisada Iswiidhan la shaqeyso? Codkaagu waa muhiim!
Kaniisadda Iswidhan waa tan ugu weyn ee Sweden oo leh 5.8 milyan xubnood. Aasaaska masiixiga wuxuu muujinayaa ballanqaad ku saabsan qiimaha iyo sharafta dadka oo dhan iyo shaqada firfircoon ee deegaanka iyo cimilada. Xubin ahaan, waxaad wax ku biirineysaa bulshada, farxadda, quusitaanka iyo macnaha naftaada iyo dadka kale, tusaale ahaan baabtiisyada, aroosyada, adeegyada kale, iskuulka barbaarinta furan, howlaha carruurta iyo dhalinyarada, kooxaha iyo riwaayadaha.
Waxaad sidoo kale gacan ka geysaneysaa sidii loo ilaalin lahaa hidaha iyo dhaqanka guud, qaab dhismeedyo iyo dhaqanno, waxaadna ku lug leedahay taageerida shaqada bulshada ee Kaniisadda ee loogu talagalay dadka ku jira xaaladaha nugul, iyo kuwa ku nool kalinimada iyo murugada.
Sidan ayaad u codeyneysaa
Ka codee maalinta doorashada 19 Sebtembar goobtaada doorashada
Xaruntaada codbixinta iyo saacadaha furitaanka ayaa lagu muujiyey warqadda codbixinta. Xusuusin! Waxaad ka codeyn kartaa oo keliya goobta codbixinta maalinta doorashada. Fadlan, keen Aqoonsigaaga iyo sidoo kale kaarka codbixinta.
Waad codeyn kartaa horaantii 6 Sebtember ilaa iyo marka lagu daro maalinta doorashada 19ka Sebtember. Dhammaan codadka laga dhiibto qolalka hore ee codbixinta waxaa loogu yeeraa codbixinno hore, xitaa haddii codbixintu ay dhacdo maalinta doorashada. Waxaad ka heli doontaa dhammaan goobaha iyo saacadaha furitaanka svenskakyrkan.se/kyrkoval. Waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato kaarkaaga codeynta iyo dukumentigaaga aqoonsiga.
Codeynta boostada lagu dirayo
Si aad ugu codbixiso boostada, waxaad u baahan tahay xirmo codbixin boosta ah. Waxaad ka soo qaadan kartaa xafiiska kaniisadda ama xoola-dhaqatada. Xirmadan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida loogu codeeyo boostada. Codbixinta boostada ayaa loo baahan yahay in la soo diro si ay u timaaddo kiniisadda ugu dambayn 17 Sebtember (15 Sebtember haddii aad dibadda ka codayso).
U codee ergo
Si aad ugu codbixiso boostada, waxaad u baahan tahay xirmo codbixin boosta ah. Waxaad ka soo qaadan kartaa xafiiska kaniisadda ama xoola-dhaqatada. Xirmadan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida loogu codeeyo boostada. Hagahaaga ayaa kudiriya codkaaga goob codbixin ama goob codbixin hore oo ku taal kaniisadda ama wadaadka aad ka tirsan tahay.
Hadaad dibada joogto maalinta doorashada
Haddii aad ka diiwaangashan tahay kaniisadda ku taal Iswiidhan laakiin aad ku sugan tahay dibadda arrimo la xiriira doorashada, waxaad ku codeyn kartaa boostada. Si aad ugu codbixiso boostada, waxaad u baahan tahay xirmo codbixin boosta ah. Waad ka soo qaadan kartaa ama ka dalban kartaa xafiiskaaga kaniisadda ama xoola-dhaqatada, ama kaniisadda dibedda. Haddii aadan haysan kaarka codbixinta, waxaad dalban kartaa mid cusub. Ka dib waxaa loo diraa kaniisadda shisheeye ee kuugu dhow. Codkaaga boostada waa inuu helaa guddiga kaniisadda ugu dambeyn 15ka Sebtember.
Weydiiso caawimaad haddii aadan hubin
Way fiicantahay in la ogaado in qof kasta oo ka shaqeeya goobaha codbixinta iyo qolalka hore ee codbixinta ay waajib ku tahay wax qarinta.
Codbixintaadu waxay saameyn ku leedahay sida loo maamulo Kaniisada Iswiidhan
Doorashada kaniisadda, waxaad ku codeyn kartaa seddex doorasho.
Doorashada golaha kaniisadda - maxalliga ah
Golaha kaniisadda ayaa go'aamiya qaab dhismeedka howlaha adiga kugu dhow, kaniisaddaada iyo taariikhdaada. Tani waxay ku lug yeelan kartaa, tusaale ahaan, go'aan lagu shaqaaleysiinayo wadaad kale si uu ula shaqeeyo waayeelka iyo bukaanka; haddii dugsi furan oo furan laga furo guriga kaniisadda; iyo ku saabsan maalgashiga kafateeriyada luqadeed iyo latalinta qaxootiga.
Waraaqaha codbixinta cad.
Doorashada golaha diimaha - gobol
Kaniisada Iswiidhan waxay u qaybsan tahay 13 wadaad. Golaha wadaadada waa go aanka go'aan qaadashada. Heer diineed ee heer gobol, waxaa go'aan laga gaaraa deeqaha lagu dayactirayo kaniisadaha; Iskuduwidda noocyada taageerada kala duwan, tusaale ahaan, hoyga xilliga qaboobaha; Taageerada naafada; Caawinta qaxootiga iyo isdhexgalka; Dadaallada cimilada iyo wixii la mid ah.
Waraaqaha doorashada ee casaanka ah.
Doorashada golaha kaniisadda - qaran ahaan
Golaha kaniisaddu waa goaanka ugu sarreeya kaniisada Iswiidhan oo leh 251 xubnood. Heer qaran, waxaa la gaaraa go'aanno guud ahaan saameeya Kaniisada Iswiidhan oo dhan. Mid ka mid ah tusaalaha noocan oo kale ah ayaa ah in sabuuradda lagu daro buugga.
Waraaqaha codbixinta ee jaalaha ah.
Kooxaha magacaabista iyo musharixiinta
Kooxaha ka qeyb gala doorashada kaniisada waxaa loogu yeeraa kooxo magacaabid. Waxay si aan caadi ahayn ula xiriiraan xisbiyada doorashada guud.
Waxaad qof ahaan ugu codeyn kartaa seddex murashax adigoo ku dhejinaya warqadda codbixinta. Saxitaanka waxay kordhisaa fursadda musharraxa in la doorto iyo inuu ku metelo. Haddii aadan sameynin wax sixitaan ah, waxaa helaya codkaaga kooxda magacaabista.
In kabadan 5 milyan ayaa xaq u leh inay wax doortaan
Doorashada kaniisadda ee 2021, 5 milyan oo xubnood ayaa xaq u leh inay wax doortaan. Qof kasta oo ugu yaraan jira 16 sano ugu dambeyn maalinta doorashada kana tirsan kaniisada Iswiidhan wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in lagaa diiwaangeliyo Iswiidhan.
Kaarka codbixintu waa dukumenti qiimo leh. Waxaa ku jira macluumaad ku saabsan goobta codbixintaada iyo halka aad ka codeyn karto goor hore. Waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato kaarkaaga codbixinta haddii aad goor hore codeyso. Waxaad sidoo kale ubaahantahay inaad awoodid inaad isku aqoonsato. Haddii aad ka codeyso goobtaada doorashada, waa kugu filan tahay inaad haysato aqoonsigaaga.
Kaadhka codbixinta waxaa loo diri doonaa cinwaankaaga diiwaangashan waana inaad heshaa ugu dambeyn 1 Sebtember.
Dalbo kaar cusub oo codbixin ah
Haddii aad lumiso kaarkaaga codbixinta, waxaad heli kartaa mid cusub (oo loogu yeero kaarka codbixinta laba jeer). Dalbo kaar cusub oo codbixineed adigoo la xiriiraya kaniisaddaada. Waxaad sidoo kale ka dalban kartaa svenskakyrkan.se/kyrkoval. Kaarka cusub ee codbixinta waxaa loo diri doonaa cinwaankaaga diiwaangashan
Marka xarumaha codbixinta iyo codbixinta waqti hore la xiro Sebtember 19, waxaa bilaaban doonta tirinta codadka. Codadka waxaa loo diiwaangeliyaa si dijital ah waxaana tirinta lagala socon karaa svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Doorashada kaniisadda corona-ka'ammaan ah
Kaniisada Iswiidhan waxay ku dadaalaysaa in qof kasta oo doonaya inuu codeeyo uu ku awoodo inuu ku codeeyo si nabad ah oo xasiloon. Iyada oo la tashaneysa Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha ee Sweden, hay'adda doorashada ayaa sidaas darteed tixgelisay in cudurka faafa ee corona uu u ekaan karo sidii uu ahaa guga 2021, marka la gaaro xilliga doorashada. An macnaheedu waa, tusaale ahaan, qolalka ay codbixintu ka dhaceyso waxaa loo diyaarin doonaa inay awood u yeeshaan inay u soo bandhigaan xaashiyaha plexiglass, xoqidda aalkolada iyo tilmaamaha cad ee cod bixiyayaasha.
Si looga fogaado halista faafinta iyo ciriiriga:
● Fadlan si xor ah u codee wakhti hore. Qolalka hore ee codbixintu waxay furan yihiin 6 Sebtember waxayna furan yihiin illaa maalinta doorashada ee 19 Sebtember.
● Ku codee boostada. Waad samayn kartaa isla marka aad hesho kaarkaaga codbixinta. Maskaxda ku hay in codeynta boostada ay u baahan tahay inay timaado ugu dambeyn 17 Sebtember. Xirmooyinka codbixinta ee boostada waxaa laga heli karaa xafiiska kaniisadda iyo xoola dhaqatada.
● Haddii ay dhibaato kaa haysato inaad timaado goobta cod-bixinta ama goor hore goobta cod-bixinta, waxaad ku codeyn kartaa warqad-diris. Markaa waxaad u baahan tahay xirmo codbixin boosta ah. Xirmooyinka codbixinta ee boostada waxaa laga heli karaa xafiiska kaniisadda iyo xoola dhaqatada.
● Codbixinta doorashada iyo codbixinta hore waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan sida looga fogaado ciriiriga. Raac tilmaamaha oo muuji tixgelinta.
Adeegga Val wuxuu furmayaa 30ka Ogosto waxaana laga heli karaa tel: 010-18 19 400. Intaas ka hor, waxaad wici kartaa kaniisada Iswiidhan 018-16 95 00.
Inbadan oo kusaabsan codbixinta warqad iyo diris
Ciddii dooneysa waxay ku codeyn kartaa warqad iyo diris. Si aad taas u awoodo, waxaad u baahan tahay xirmo cod-bixin boosto ah. Waad ka qaadan kartaa, ama qof ayaa kaaga soo qaadi kara xafiiska kaniisadda ama xoola-dhaqatada. Waxaad sidoo kale ku dalban kartaa adoo wacaya adeegga doorashada: 010-18 19 400 laga bilaabo 30 Ogosto. Intaas ka hor, waxaad wici kartaa kaniisada Iswiidhan 018-16 95 00.
Xirmada codeynta boostada waxay ka kooban tahay waraaqaha codbixinta iyo baqshadaha doorasho kasta, baqshad warqad iyo codbixin diris ah iyo baqshad dibedda ah, oo loogu talagalay kuwa doonaya inay ku codeeyaan boostada. Waxa sidoo kale oo ku jira macluumaad ku saabsan sida loogu codeeyo boostada iyo in loo codeeyo waraaqad geeyaha.
Waa tan sida loo sameeyo labadaba markaad ku codeyso boostada iyo waraaqad geeyaha:
Haddii aadan haysan warqadda codbixinta ee kooxda magacaabidda, waxaad ku qori kartaa magaca kooxda magacaabidda warqad cod-bixin oo maran.
Waxaad ku ridi doontaa warqad codbixin doorasho kasta (warqad cad oo loogu talagalay golaha kaniisadda maxalliga ah, warqadda cod-bixinta ee casaanka ee golaha diimaha, waraaqda jaalaha ah ee golaha kaniisadda qaranka) baqshad doorasho kadibna xir.
Iyada oo ay goobjoog yihiin laba markhaati, ku rid baqshadda afkeeda xiran codbixinta ee warqadda ku jirta iyo baqshadda warqadda (K4) ee ku jirta baakadka cod-bixinta boostada. Xir baqshadda.
Baqshadda loogu talagalay boostada iyo cod bixiyaha (K4), ku qor lambarkaaga amniga bulshada iyo saxiixaaga caddeyn ah inaad si sax ah u sameysay codeynta.
Isla baqshad isku mid ah oo loogu talagalay boostada iyo cod bixiyaha (K4), labada markhaati waxay xaqiijinayaan saxiixyadooda inay hubinayaan inay arkeen adigoo saxeexaya baqshadda. Markhaatiyaasha waxay u baahan yihiin inay ahaadaan 18 sano ama ka weyn.
Haddii aad ku codeyneyso adoo diraya warqad, ka dib raac talaabooyinkan:
Warqad-qaadaha ayaa geeya baqshadda (K4) goobta cod-bixinta ama goor hore goobta cod-bixinta. Waraaqda codbixinta waa in lagu daraa haddii codbixinta lagu ridayo goob codbixin hore, laakiin waa fikrad fiican inaad la timaado xitaa haddii lagu ridayo goobtaada doorashada.
Warqadd qaadaha waxuu u gudbinayaa codkaaga boostada wuxuuna qorayaa magacooda, lambarka soshal sekuuritiga iyo cinwaanka waxuuna ku caddeynayaan saxiixooda inaad ku saxiixday bayaanka baqshadda. Warqad-wadehu waa inuu awood u yeeshaa inuu aqoonsado naftooda oo uu ugu yaraan 18 sano jiro.
Haddii aad ku codeynayso boostada, raac talaabooyinkan ka dib markaad saxeexdo baqshadda warqadda iyo warqadda dirista oo aad markhaati u noqoto kadibna saxiixaan labadda markhaati:
Dhig baqshadda (K4) baqshad loogu talagalay codbixinta boostada iyo codbixinta (K5) warqadda codbixinta.
Xusuusin! Geli warqadda codbixinta si cinwaanka guddiga diyooshanka looga arki karo daaqadda midig ee baqshadda iyo macluumaadka guddiga doorashada, deegaanka iyo lambarkaaga warqadda codbixinta waxaa lagu arki karaa daaqadda bidix ee baqshadda.
Soo dir warqadda. Shaabad looma baahna.
Xusuusin! So dir warqadda si ay u timaaddo ugu dambeyn 17 Sebtember.
Adeegga Val wuxuu furmayaa 30ka Ogosto waxaana laga heli karaa tel: 010-18 19 400. Intaa ka hor, waxaad kala xiriiri kartaa Kaniisadda iswiidhishka ee tel: 018-16 95 00. Waxaad sidoo kale u soo diri kartaa emayl kyrkoval@svenskakyrkan.se